Ahoana ny fomba hanakanana ny Spam an'i Shina amin'ny tondra-drano ny iPhone? Torohevitra avy amin'ny Semalt
Azonao atao ny mahafantatra ny dikan'ny fampiasana tenimiafina matanjaka sy ny fanamafisana ny fanamafisana roa (2FA) momba ny fitaovana Apple anao. An-jatony an'arivony ireo hafatra tsy manan-danja Shinoa no nalefa ho an'ny sy avy amin'ny fitaovana iPhone. Ny kaonty iMessage voasambotra dia mety hameno ny iPad, iPhone, Mac na ireo fitaovana mitovy amin'izany miaraka amin'ny fahamalinana sy ny gobbledygook maro kokoa noho izay azonao eritreretina. Mandritra ny teknolojia, tsy hack izany fa famantarana fa nisy olona nahatsapa ny tenimiafinao ary mampiasa ny fitaovana ho an'ny hetsika tsy misy dikany.
Andrew Dyhan, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia manana fomba fanao mahazatra izay hanampy anao ho voaro amin'ny fanafihana toy izany - коммутатор второго уровня.
Maro ireo mpampiasa no namoy ny ainy tamin'ireny tetika ireny. Nisy orinasan-tserasera iray monina any Angletera, Sophos, namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaogy Naked Security, izay nizara ny traikefan'ireo mpampiasa iPhone sasany. Nilaza ny iray amin'ireo mpampiasa fa nampiasaina tsy ara-dalàna ny iPhone-n'izy ireo mba handefa hafatra sandoka ho an'ny namany sy ny fianakaviany rehetra. Tsy nisy tatitra momba ny fandikana ny angon-drakitra navoaka hatramin'izay, ary tsy misy fomba ahafahana maka ny tenimiafin'ny olona amin'ny fitaovana iOS. Ao anatin'izany toe-javatra izany, mety tsy ho vitan'ny olona ny milaza ny zava-mitranga, saingy i Apple Inc. dia nanomboka i John Munn avy ao Belfast namintina ilay olana, ary nilaza fa mitaraina ny mpisera Android nandritra ny taona maro..Maro ireo tenimiafin'ny iPhone no voamarika, ary ny kaonty dia hacked isan'andro. Tsy i Jaona irery no niharan'ny fanadihadihana toa an'i Sophos nanadihady ilay raharaha ary hitany fa tsy nahazo fitarainana momba ny fanadihadiana nataony i Apple ary efa nametraka olana marobe.
Ahoana ny fiasan'ny fanafihana?
Voalohany indrindra, ny mpampiasa dia mahazo hafatra milaza fa ny IDn'ny Apple dia azo jerena avy amin'ny toerana tsy fantatra na fitaovana. Raha mahazo fampandrenesana toy izany ao amin'ny solosainao ianao dia tsy misy zavatra azonao atao. Fa raha mahazo hafatra tahaka izany ianao ao amin'ny findainao dia tokony tsindrio ny bokotra OK. Na izany na tsy izany, rehefa manomboka ny hafatra voalohany dia hanomboka ny safo-drano. Ny fitaovana maro dia maro no hita isan'andro. Ny mpampiasa ihany koa dia mitaraina momba ny emojis sy ny lahatsoratra avy amin'ny loharano mampiahiahy, ary ireo hafatra ireo dia voasoratra tanteraka amin'ny teny Sinoa.
Ireo karazana hafatra ireo ihany no nalefa ho an'olona an'arivony avy amin'ny kaonty amin'ny aretina. Raha mandika ireo hafatra ireo ianao, dia mety hanondro anao amin'ny casino na clubclub any Macau. Misy ny fahafaha-manazongadon'ireo mpaka an-keriny hianjera ny fampahalalanao amin'ny fampiasàna ny anaran'ny casinos malaza, saingy ny hetsika tahaka izany dia mitarika ho amin'ny tsy fisian-java-tsarobidin'ny spam. Raha milaza "fampahalalana bebe kokoa" izany, dia midika izany fa ny mpanafika dia efa nahatratra ny tenimiafinao na nisintona ny angon-drakitrao handikana lalàna sasany an-tserasera. Apple dia milaza fa tsy azo atao ny miditra amin'ny kaonty iMessage amin'ny mpampiasa, fa matetika ireo mpiloka dia mamitaka ny mpampiasa ary manodina azy ireo any amin'ny fako tsy dia nisy toy izany. Ny fahombiazan'ny mpampiasa dia nanimba ny tenimiafin'izy ireo tamin'ny fandikana sasany, toa an'i LinkedIn sy Yahoo. Mety ho nampiasa tenimiafina mitovy amin'ny kaonty samihafa izy ireo, ka mamela ireo hackers mifanandrify amina IDa hafa miaraka amin'ny tenimiafina mitovy. Ho famaranana, tokony hampiasa tenimiafina matanjaka izay mety tsy ho voamarik'ireo mpikirakira. Tokony hanavao matetika ny tenimiafinao matetika ianao ary hihazona ny 2FA hivoatra. Raha manana ahiahy momba ny fiarovana ny kaontinao ianao, dia tokony hijery ny torohevitr'i Apple ianao.